Jireenya fayyadamtootaa erga qaala'iinsa qarshiitiin booda - BBC News Afaan Oromoo
Jireenya fayyadamtootaa erga qaala'iinsa qarshiitiin booda
Madda suuraa, ZACHARIAS ABUBEKER
Itoophiyaatti erga dandeettiin bituu qarshii akka hir'atu taasifamee ji'oota muraasa lakkoofsiseera. Jiraattoonni Magaalaa Finfinnee BBC'n dubbises ergasii jireenyi baayyee nutti cimeera jedhu.
Jiraattuu Maagalichaa kan taate Aadde Asteer Gabruu meeshaalee haala doolaaraa wajjin walitti dhufeenya hin qabne dabalatee, gatiin shaqaxaawwan bu'uuraa dabaleera jedhu.
Haalicha fakkeenyaan yoo ibsan, zayitii nyaataa leetira tokko duraan qarshii 52n bitaa turan amma daballii qarshii saddeetii agarsiiseera. Kana malees gatiin saamunaa osoo hin hafiin dabaluusaa cimsanii dubbatu.
Haaluma daballii gatiii kanaan walqabatees yeroon isaan itti daldaltoota waliin haasaa hin barbaachisne keessa galan jiraachuulleen Aadde Asteer hin dhoksine. Warreen daldala xixiqqaa gaggeessanis sababii warri isaan irraa bitan gatii dabalaniif isaan akka gatii dabalan dubbatu.
Haaluma walfakkaatuunis, kanneen jimlaa gurguran, qaamoleen meeshaalee biyya alaatii galchan gatii dabaluu akka sababaatti himu.
Raabsaa meeshaalee jimlaa magaalaa Finfinnee keessaa tokko kan ta'anii fi maqaa isaanii eeruu kan hin barbaanne tokko BBC'tti akka himanitti, isaan daballii gatii kan taasisan sababa dhaabbileen biyya alaatii galchan gatii isaanitti dabalaniif ta'uu dubbateera.
Kanaafis akka ragaatti waliigaltee dhaabbata biyya alaatii meeshaalee galchu waliin baatii lamaan dura taasisan BBC'tti agarsiiseera. Fakkeenyaaf, kubbaaniyaan meeshaalee alaa galchu sunis sooftii ykn haxxooftuu minjaalaa tokko gatii qarshii 12 tiin dhaabbata raabsuuf dhiyeessuuf walii galee kan ture ta'ulleen, erga dandeettiin qarshii gadi buufameen booda gatiin kun qarshii 14.50 ta'uu xalayaan beeksiseera.
Kubbaaniyoota meeshaalee biyya alaatii galchan keessaa tokko Leegzharii inaa Poppulaar Tireediingi isa tokkoodha. Obbo Abeel Aallebbaachoo, itti gaafatamaan kubaaniyyichaa akka jedhanitti, daballii gatiitiif sababni inni guddaan hir'iina sharafa biyya alaati. Doolaara argachuun baayyee cimaa waan ta'eefuu oomishoota biyya alaatii haala barbaadamuun galchuun ni ulfaata jedhu.
Fakkeenyaafis 'Saamunaa popular jedhamu ni galchina. Omishichi gabaa irratti barbaadamaa ta'ulleen kan man-kuusaa qabnu hunda yeroo tokkoon baafane hin gurgurru. Sababiin isaas yeroo gabaabaa keessatti doolaara argachuun deebifnee galchuun rakkisaa waan ta'eef tarsiimoo gabaatiin akka omishichi gabaarra hin banneetti xiqqeessinee dhiheessina'' jechuun dubbataniiru.
Adeemsi akkasii kunis dhiheessiitiin waan hir'atuufuu gatiin akka ol ka'u dubbatu oggeessi diinadgee Obbo Saamu'eel Saahiilee.
Akka isaaniitti, dandeettiin bittaa qarshii kan hir'ate, daldala biyya alaa cimsuuf yaadameeti. Galmi dhuma murtee kanaas omishoota gara biyya alaatti erginu kan gara biyyaa galchinu waliin wal simsiisuudhas jedhaniiru.
Tarkaanfiin fudhatame waan yaadame galmaan gaheeraa?
''Haala diinagdee biyyi keessatti argamtuun, tarkaanfiin mootummaan fudhate sirriidha jedhee hin yaadu. Haa ta'u malee tarkaanfiin fudhatame bu'a-qabeessa moo miti jechuufis yeroonsaa ganaadha. Yoo xinnaate baatii sadi eeguu qabna,'' jedhu Obbo Saamu'eel.
Abbaa Taayitaa Bitattootaa fi Dorgommii Daldalaatti Daarektarri Daarektoreetii Ragaalee Gabaa, Obbo Ittisaa Damee qaamoleen mi'oota biyya alaatii galchanii fi isa raabsan sababii dinadgee osoo hin qbaatiin gara fuula duraatti maaltu ta'uu mala jechuu qofaan tarkaanfiiwwan adda addaa fudhataniiru. Kanaanis daballiin gatii mul'ateera jedhaniiru.
Warreen biyya alaatii galchan dabala gatii hanga dhibbantaa 120 taasisan himatamuu isaanii fi kanneen dabala gatii fudhatama hin qabne taasisan gara seeraatti dhiyeessuuf ragaaleen walitti qabamaa jiraachuu Obbo Ittisaan BBC'tti himaniiru.
Sharafni alaa hanqina qorichaa fidaa jira
Dargaggeessa kishaafee hafuura baafannuun haguugamuuf fala dhawe
‘Qorannoon AUn Tigiraayitti nan gaggeessa jedhu bu’uura seeraa hinqabu’ – Itoophiyaa
KMNI tibba filannootti dhimmoota mirga namoomaa akka hin taajjabne dhorkame
WBOn lammiilee biyya alaa ugureera jedhus qondaalli mootummaa dhara jedhan
Itoophiyaan waggoota 50 darban keessatti eessaa garamitti?